तुरुन्त १० किलोसम्म तौल घटाउन अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय ! -Dainikplus-
By Dainik Plus On July 2, 2021 In स्वास्थ्य
काठमाडौँ । तौल घटाउने वा तौललाई नियन्त्रण गर्ने काम धेरै नै चुनौतिपूर्ण छ । खासगरी यस्ता मानिसको लागि जो खानामा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । हामी धेरै नै तनाबपूर्ण तथा ब्यस्त जीवन निर्बाह गर्दछौं।
घ्यु कुमारी हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो असर पुर्याउने खाद्यपदार्थमा घ्यु कुमारी पनि एक हो । यसमा ७५ सक्रिय पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छन। यसका साथै घ्यु कुमारीमा एमिनो तथा फैटी एसिड प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा एन्टीअक्सिदेंत गुण हुने भएकोले यसले पाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याई बोसोलाई हटाउनमा मद्दत गर्दछ । यसका साथै यसको प्रयोगले शरीरका बिषादीहरुलाई हटाई पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउदछ ।
कागती कागतीमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसै कारणले गर्दा तौल घटाउनको लागि कागती धेरै नै प्रभावकारी छ। र यसले शरीरलाई शक्ति पनि प्रदान गर्दछ ।
अदुवा स्वास्थ्यमा राम्रो असर पुर्याउने मसलामा अदुवा पनि एक हो । यसमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसका साथै मग्नेसियम तथा अरु पौष्टिक तत्वहरु पनि प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले यसको प्रयोगले शरीरको प्रक्रियाहरुमा सुधार ल्याउन मद्दत मिल्दछ।
मह छिटो शक्ति प्रदान गर्ने स्रोतको रुपमा महलाई लिइन्छ । तर यसले बोसोलाई घटाउनमा पनि मद्दत गर्दछ । महले खानाको स्वाद पनि बढाउछ । तौल घटाउनको लागि अपनाउनुपर्ने विधि निम्नानुसार छ ।
१.१ गिलास सफा पानी
२. २ – ३ चम्चा घ्यु कुमारीको रस
३. १ चम्चा कागतीको रस
४. १ चम्चा अदुवाको धुलो
५. १ चम्चा मह
बनाउने विधि सबैभन्दा पहिला २ – ३ चम्चा घ्यु कुमारीको रसलाई १ गिलास सफा पानीमा मिसाउनुहोस् । त्यसपछि यसमा कागतीको रस र मह तथा अदुवाको धुलोलाइ मिसाई राम्ररी चलाउनुहोस् । र यस पेयपदार्थलाई बिहान खाली पेटमा पिउनुहोस । यसको नियमित प्रयोगले तपाइको तौल छिटै घट्नेछ ।
यी ८ प्रकारका व्यक्तिले भूलेर पनि नखानुहोस् मेवा, नत्र हुनसक्छ घातक
फेरि ह्वात्तै बढ्यो पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, यस्तो छ नयाँ मूल्यदर